The Gardener: 2009-05-03
ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်မိတာနဲ့ ဘာသာပြန်ချင်သွားတယ် ... ရိုးလွန်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ ....။ တကယ်တော့လည်း စိတ်က ရိုးလွန်းတာတွေကို သိဖို့လိုအပ်တာပါ ...။ ဒီလိုကဗျာတွေကို healing poem လို့ခေါ်ပါတယ် ..။ သူတို့ က အယူအဆတခုခုကိုပေးတယ် .......။လူတွေမှာ အကန့်အသတ်မဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်...။ အကန့်အသတ်မဲ့ရှိနေပေမယ့် ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုမရှိရင် .... အကန့်အသတ်မဲ့စွာ မသုံးရသေးဘဲ ဆက်ရှိသွားတော့မှာပါ ...။ ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာဟာ လူသားအားလုံးကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ ... အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်တယ် ...။
တခါတရံ .. မလုံလောက်ဘူးလို့ထင်မိ
ထုတ်ပြဖို့လည်း စိုးရိမ်မိ ...။
ပြည့်ဝလေ... ပိုရလေ ဆိုတာ..။
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ အဆုံးမဲ့ .. ကာလမဲ့။
ရှိသမျှ ကုသနိုင်စွမ်းတွေထဲမှာ ချစ်ခြင်းတရားဟာ စွမ်းအားအမြင့်ဆုံး ...
လုံးဝ ဆက်မရှင်သန်နိုင်ဘူး ...။
ရှင်သန်နိုင်တယ်လို့ အယူမှားကြ ..
ငါတို့ကိုယ်ကို ငါတို့ ..ချစ်ခင်ခြင်းဟာ ..
ငါတို့ကို ကုသမယ့် အစွမ်းပဲ ...
အထုံပါအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတယ် ....။ ။
We have so much love in this world,
and we have so much love in our hearts,
Sometimes we think there isn't enough,
or there is justasmall amount.
So we hoard what we have,
or we are afraid to let it go.
We are afraid to let it out.
But those of us who are willing to learn,
realise that the more love we allow to flow out from us,
the more there is within us and the more we receive.
It is endless and timeless.
Love is really the most powerful healing force that there is.
Without love we could not survive at all.
If little ting babies are not given love and affection,
Most of us think we can survive without love,
Love for ourselves is the power that heals us.
Note: Our only limitations are our fears.
(ဆရာဘိုးဘိုးကို အားကျလို့ ဘာသာပြန်တဲ့အကြောင်း အဝေးရောက် အစ်မကြီး သာဓုခေါ်ဖို့ ... :P )